UMongameli waseTanzania ubeka umkhankaso omkhulu wokuvuselela ezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ZaseTanzania » UMongameli waseTanzania ubeka umkhankaso omkhulu wokuvuselela ezokuvakasha
Izindaba Ezintsha • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Izindaba ZaseTanzania • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
by I-Apolinari Tairo - eTN Tanzania
Ibhalwe ngu I-Apolinari Tairo - eTN Tanzania
UMengameli waseTanzania uSamia Suluhu Hassan wethule uhlelo lwezokuvakasha oluzodalula iTanzania ngaphambi kwezimakethe zezokuvakasha zomhlaba, kuhloswe ngalo ukuheha izivakashi eziningi kanye nokutshalwa kwezimali ezweni.
Uhlelo lwedokodo olusanda kwethulwa lwe- “Royal Tour” luzoqoshwa ezindaweni ezahlukene eTanzania.
Kulolu hambo, uMongameli uzojoyina izivakashi ngokwakhe bese ebamba iqhaza ukurekhoda lolu hambo lokuthunyelwa nokusakazwa komhlaba.
Ukuqoshwa kwedokhumentari okuhloswe ngayo ukuqhakambisa iTanzania emazweni omhlaba kuqale ngo-Agasti 28, 2021, eZanzibar lapho uMongameli okwamanje evakashele khona ngokusemthethweni.
Umbhalo wezokuvakasha uzoqoshwa ngaphansi kukaSihlalo wekomidi likaMongameli ozoqondisa uhlelo lokuqhakambisa iTanzania emhlabeni jikelele futhi onguNobhala Ongunaphakade eMnyangweni Wezolwazi, Amasiko, Ezobuciko nezeMidlalo.
"UMengameli uzokhombisa izivakashi ezehlukene ezokuvakasha, ukutshalwa kwezimali, ezobuciko namasiko atholakala eTanzania," kufundeka ingxenye yesitatimende esikhishwe yiHhovisi likaMongameli waseTanzania. Uhlelo lweRoyal Tours kuhloswe ngalo ukuqinisa ubudlelwano phakathi kweTanzania nezinye izizwe, futhi nokukhuthaza ukubambisana kwezokuvakasha nokuhamba phakathi Tanzania, ezinye izizwe, nezinhlangano.
UMongameli Samia uthe uhulumeni useqalise amasu anolaka okufaka uphawu ezweni ngokukhangisa ngamathuba ezomnotho akhona emhlabeni jikelele. Ngemuva kokuthatha isikhundla sokuba sehhovisi eliphezulu eTanzania ngoMashi nonyaka, uMongameli Samia uthe uhulumeni wakhe ulindele ukukhuphula isibalo sabavakashi sisuke ezigidini zamanje eziyi-1.5 million siye ezigidini ezinhlanu eminyakeni emihlanu ezayo.
Emugqeni ofanayo, uhulumeni ulindele ukukhuphula imali yezokuvakasha isuka ku-US $ 2.6 billion wamanje iye ku-US $ 6 billion ngesikhathi esifanayo, kusho yena. Ukufeza izinhloso ezihlosiwe, uhulumeni manje uheha utshalomali lwamahhotela nezokuvakasha ngokuhlukahluka kwezindawo ezivakashelwa izivakashi, ikakhulukazi izindawo zomlando namabhishi olwandle, phakathi kwezinye izindawo ezazingakakhiwa ngokuphelele ukuheha izivakashi.
I-Tanzania izophinda futhi ikhombe amazwe anamasu okukhangisa ezokuvakasha zawo ngokusebenzisa ohambweni lwamanxusa namanxusa akhona ngokukhangisa okunolaka kwemikhiqizo yayo ye-safari ezingeni lomhlaba wonke. Ukubuyekezwa kwezintela ezingavunyelwe kwezokuvakasha, okuhlose ukukhulula abatshalizimali enteleni nasemthwalweni wemali kuzobhekwa futhi.
Ingqungquthela, ulwandle kanye nemikhiqizo yabavakashi yamagugu, kanye nemikhumbi yokuhamba ngesikebhe yizindawo ezingaba khona ezidinga ukuthuthukiswa nokumakethwa ukunxenxa izivakashi eziningi nokutshalwa kwezokuvakasha - ikakhulukazi amahhotela, ezokundiza emoyeni, nengqalasizinda.
Ukuthuthukiswa kwamapaki kazwelonke amasha eNtshonalanga ITanzania kulindeleke ukuthi ithuthukise ezokuvakasha endaweni yaseGreat Lakes, edume ngezimfene nama-gorilla azulazula phakathi kweTanzania, i-Uganda, iRwanda neDR Congo. Amapaki amasha kulindeleke ukuthi nawo athuthukise ezokuvakasha zezifunda nezangaphakathi kwe-Afrika phakathi kweTanzania, i-Uganda, iRwanda, iBurundi, neDemocratic of Congo (iDRC).
Ezokuvakasha ziphakathi kwezindawo ezibalulekile zomnotho amazwe ase-Afrika abheke ukuthi athuthukise, akhangise, futhi akhuthaze inqubekelaphambili yezwekazi.
UMongameli Samia wenza uHambo Lombuso lwezinsuku ezimbili eKenya ngoMeyi nonyaka, wabe eseba nezingxoxo noMongameli waseKenya uMnu u-Uhuru Kenyatta, ebhekise ekuthuthukiseni ukuhweba nokunyakaza kwabantu phakathi kwamazwe amabili angomakhelwane. Izinhloko zombuso zombili zivumelene ngokuhlanganyela ukuqeda izithiyo ezivimbela ukuhamba kahle kwezohwebo nabantu phakathi kwamazwe ama-2 aseMpumalanga Afrika bese begqugquzela izivakashi zezifunda nezamazwe omhlaba ukuthi zivakashele izwe ngalinye.
Kamuva bayalela izikhulu zabo ukuthi ziqale futhi ziphethe izingxoxo zokuhweba ukuvimba umehluko omkhulu phakathi kwamazwe ama-2. Ukunyakaza kwabantu kufaka phakathi izivakashi zasendaweni, zezifunda nezangaphandle ezivakashela eKenya, eTanzania, kanye naso sonke isifunda saseMpumalanga Afrika.
I-Apolinari Tairo - eTN Tanzania